'हामी वर्षौँदेखि लकडाउनमा छौँ' | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
‘हामी वर्षौँदेखि लकडाउनमा छौँ’
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १७:४२
शरणार्थी पर्‍यौँ हजुर… बिजोग छ, भनेर पनि कसरी भन्नू ? भोक, अभाव र तिरस्कारलाई खई कसरी पो ‘सगरमाथा’ मान्नू ? बिहान चियासँगै दैनिकी सुरु गरेर तपाईँहरू राती मिष्टान्न भोजनसँगै दिनको अन्त्य गर्नुहुन्छ । हामी बिहान अभावसँगै दैनिकी सुरु गरेर अभावमै दैनिकी खत्तम गर्छौ । दिनभरि बोनस प्याकेजमा तिरस्कार र शङ्का त छदै छ । ‘टेरोरिस्ट‘ भनेर आफ्नो देशले लखेटेको हाम्मलाई शरण लिएको देशले शङ्काले नहेर्ला भनेर कसरी भन्नु ? सकस हाम्रो दैनिकी हो ।
ज्याला मजदुरी गरेर बाचिरहेका थियौ । बस्नलाई दुःख थिएन। कोरोना भाइरस नआउन्जेल नेपाल त हाम्रो ‘जन्नत’ (स्वर्ग) नै थियो नि । भाइरसले संसारलाई दुःख दिइरहेका बेला हाम्रो ‘जन्नत’ अछुत रहने कुरै भएन।
कपन बालुवा खानी स्थित शरणार्थी क्याम्पमा हामी लगभग ४ सय शरणार्थी बस्छौ । म सन् २०११ मा परिवारसहित नेपाल आएको हुँ। टहरामा बस्ने अधिकांश २०१६ पछि आएका हुन् । म्यानमारमा जातीय हिंसा भड्किएपछि हामी विभिन्न देशमा शरण लिन पुगेका छौ । बङ्गलादेश हुँदै भारत आएर नेपाल छिर्ने थोरै मात्र छन् । बङ्गलादेश, भारत र अफगानस्थानमा धेरै पुगेका छन्।
हामीलाई ‘रोहिंगा’ भन्छन् । मुस्लिम सम्प्रदायका हामीलाई म्यानमारबाट बहुसङ्ख्यक बुद्धिस्ट समुदायले लखेटेको हो । उता हाम्रो घर मात्रै होइन, भाग्न नसक्नेहरूलाई जिउँदै जलाइयो । गोली ठोकेर मारियो । बीभत्स हत्या, बलात्कार र सामूहिक आगो लगाउनु उनीहरूको लागि सामान्य थियो । ज्यान बचाउन सफल हामी शरणार्थीको रूपमा विभिन्न देश पुगेका छौ। हाम्रो नेपाल आउनुको कथा यही हो ।
कोरोना भाइरस आउनुअघि त जसोतसो जिन्दगी चलाइरहेका थियौँ । ज्याला मजदुरीले पेट भर्न पुगिरहेको थियो । शरणार्थी जीवन जसोतसो चली नै रहेको थियो । चैतको दोस्रो साता एकाएक हामीलाई टहराबाट निस्किन दिइएन । कारण बुझ्दै जाँदा त हिँडडुल गर्न नमिल्ने गरी सरकारले लकडाउन गरेछ । हिँडडुल गर्‍यो भने भाइरसले मार्छ भनेर त्यसो गरेको रे ।
२/४ दिन त सहेरै बस्यौ । मर्नु भन्दा भित्रै बस्नु जाती लाग्यो । सरकारको निर्णय मान्नु हाम्रो कर्तव्य पनि थियो । तर, एक सातामै हाम्रो खाना सकिइसकेको थियो । बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई लकडाउन घाँडो भयो । हामी सानो ठाउँमा धेरै जना बसेका छौ । एउटा टहरामा ८/१० जना बस्छौ । अझ भनौँ एउटा परिवारमा ८/१० हुनु हाम्रो सम्प्रदायको लागि सामान्य हो। बच्चा बच्ची धेरै भएकाले कमाउने मानिस पनि कम हुन्छन् । एक सातामै हाम्रो खाना सकिनुको कारण यही हो ।
साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने मास्क लगाउने गरे मात्र यो भाइरसले छुन्न रे । यो भाइरसको एक मात्र बच्ने उपाय हो रे । खानालाई अन्न छैन कहाँबाट किन्नू साबुन ? एउटा साँघुरो ठाउँमा ८/१० जना बस्नुपर्छ कसरी कायम गर्नू सामाजिक दुरी ? मास्क किन्ने पैसा भए त हामी बच्चा बच्चीलाई खाना खुवाइहाल्थ्यौँ नि । भाइरसबाट बच्ने नियम हाम्रो लागि व्यर्थ थियो, हाम्रो ध्यान भोकबाट कसरी बच्ने भन्नेमा थियो।
कता हो फेरि मुस्लिम समुदायले भाइरसले फैलाए भनेर समाचार आयो । त्यसपछि त हामीलाई धेरै गारो भयो । टहराबाट नजिकैको खाली जग्गामा निस्किदा पनि मानिसहरू आँखा तरेर हेर्थे। पसल जान प्रतिबन्ध जस्तै थियो । देश त लकडाउनमा नै थियो हामी त्यही समाजमा प्रतिबन्धित थियौ । अझ भनौँ हामी काममा निस्कने बाहेक हाम्रो परिवारको अन्य सदस्य वर्षौँदेखि नै लकडाउनमै थिए । भाइरस नआउँदै हाम्रो लागि समाजमा चहल पहल गर्नु खतरनाक थियो । हामी वर्षौँदेखि अत्यास भोगिरहेका छौ ।
दिनरात तातो टिनमुनि गुम्सिएर बस्नुको सकस अत्यास लाग्दो थियो । हामी निसास्सिइसकेका थियौ। दिनरात तातो टिनमै निसास्सिँदा डरको तिरस्कार झन् भयानक हुँदो रहेछ । हामीले टहरामै थुनिएर सकसपूर्ण दिन काट्यौ। अन्न सकिएको ३/४ दिनसम्म भोकै बस्यौ। साहुसँग काम गरेको ठाउँको पैसा लिनु थियो । फोन गर्दा उसले बहाना बनायो, ‘म त बुटवल आइसके, त्यतै मिलाउनु।’
सबै जना भोक भोकै पर्न थालेपछि बच्चाहरूलाई गारो भयो । बच्चाहरू भोकले रुन थाले । रुँदा रुँदै बेहोस होलान् झैँ लाग्यो । त्यसपछि हामीले विभिन्न सङ्घसंस्थालाई खबर गर्‍यौ। अर्को दिन आलु र चामल लिएर उनीहरू आए । त्यो राहतले २ साता त पुग्यो । त्यसपछि अवस्था उस्तै । टहराको सकसपूर्ण बसाई, समाजको तिरस्कारपूर्ण दृष्टि र शरणार्थी जीवन ।
यो भाइरसले नेपाली नेपालीलाई त नजिक हुन दिएको थिएन, हामीलाई झन् नजिक हुन के देयोस् ? नेपाली नै खान नपाएर भोकै थिए, हाम्मलाई झन् कसले राहत देयोस् ? आफ्नै सरकारले नै लखेटेर शरणार्थी बनायो, अर्काको सरकारले हाम्रो बारेमा कसरी सोचोस् ? शरणार्थीको जीवन उसै त भयानक दुःखबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, यो महामारीमा झन् दुःख किन हामीबाट टाढा भागोस् ?
सबै सबैले हाम्मलाई तिरस्कार गरे पनि भोकले तिरस्कार गरेन, लागिरह्यो । अभावले तिरस्कार गरेन, भइरह्यो । दुःखले दिनहुँ अङ्कमाल गरिरह्यो । मात्र हामीबाट मान्छे र मानवता टाढा भयो । दुःख अभाव र तिरस्कारले अङ्कमाल गरेको एउटा शरणार्थीको जीवन यस्तै त हो । ५ दिन भोको बस्दा कस्तो हुन्छ ? तपाईँहरूलाई त कल्पना गर्दा पनि सकस महसुस हुन्न होला किनकि, तपाईँ त १ दिन पनि भोकै बस्नु भएको छैन।
यही बेला हाम्रो टहराको १ जना बुवालाई ज्वरो आयो । अस्पताल लान साधन थिएन । ज्वरो आएर उपचार गर्न लगेको थाहा पाए मुसलमानले कोरोना सल्काए भनेर लखेट्लान् भन्ने डर थियो । केही दिन घरेलु उपचार गरियो । तर, उहाँ ठिक हुनुभएन । उपचारको लागि बाहिर निकाल्न जति गारो थियो उहाँको अन्तिम संस्कार गर्न त्यति गारो । उहाँको अन्तिम संस्कार गर्दाको सकस कसरी भन्नू ? यत्ति कल्पना गर्नू, मुसलमानले कोरोना फैलाए भनेर देशभर हल्ला फैलिएको समाजमा ज्वरो आएर मुसलमान मर्दा के होला ? बहुसङ्ख्यक बुद्धिस्टहरू भएको आफ्नै देशमा जातीय हिंसा भोगेको हाम्मलाई यहाँ त्यही घटना दोहोरिएला की भन्ने डर थियो । किनकि, यहाँ त हामी शरणार्थी थियौ ।
गएका सात महिनाका हाम्रो कथा यस्तै हो । भोक, अभाव र तिरस्कार । यो सकसपूर्ण समयको कथा हाम्रो टहरा आएर हेर्नेहरूले मात्रै महसुस गर्न सक्छन् । यो समयमा हाम्रो केटाकेटीहरूले दिनमा १ पटक खाए भने हामीले २ दिनमा एक पटक । शरणार्थीले पेटभरि खान नपाउनु सारा विश्वको लागि आश्चर्य होइन । हामी वर्षौँदेखि भोक, तिरस्कार र अभाव सहन अभ्यस्त भइसक्यौ। हामीले यो भन्दा खराब परिस्थितिको सामना गरेको भुलेको छैनौँ ।
अब जनता आफै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ
४ आश्विन २०७७, आईतवार ११:२६
३० बैशाख २०७७, मंगलवार १९:२१
मोबाइल र इन्टरनेट नै छैन कसरी अनलाइन पढ्नु र !
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १५:४४
Total Visits: 18,590